Eo am-pelatanan’ny Olom-pireneny Ny Fahasalamana ao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Eo am-pelatanan'ny Olom-pireneny Ny Fahasalamana ao Venezoela
Nandika (en) i Danelle Hood
Voadika ny 30 Jona 2016 18:52 GMT
Nanjary niharatsy kokoa tao anatin'ny volana vitsy lasa ny tsy fahampian'ny fanafody, izay efa namely mafy ny Venezoelana nanomboka elaela. Ho setrin'izany, miezaka miatrika ny olana izay efa mahatratra vondron'olona mihabetsaka hatrany ny olom-pirenena, tambajotra sy ny rafi-panohanana. Amin'ny sary, marary iray avy amin'ireo ankizy mararin'ny homamiadana ao Maracaibo, tanàna ao amin'ny faritra andrefan'ny firenena. Sary Wikimedia Commons.
Tantaraina tsara amin'ny fampahalalaham-baovao iraisampirenena ny olana ara-pahasalamana ao Venezoela ary iray amin'ireo adihevitra mafana indrindra mitranga ao anatin'ny firenena Amerika Atsimo amin'izao fotoana izao.
Tombanan'ny Federasion'ny Farmasiana ao Venezoela ho manakaiky ny 85% ny tsy fahampian'ny fanafody.
Manoloana izany tarehimarika izany, nanaiky fifanarahana nanambara ny fisian'ny krizy maha-olona ao amin'ny firenena ny Parlemanta Venezoeliana, ny tanjona dia ny hanery ny governemanta mihozongozon'ny filoha Nicolás Maduro mba hanaiky ny fanampiana iraisampirenena.
Hatramin'izao, misy ny resaka eo amin'ireo mpanao lalàna sy ny OMS, saingy raha tsy misy ny sampana mpanatanteraky ny governemanta dia fiovana kely ihany no azo antenaina.
Ny zava-misy manaitra dia mampiasa hatrany ny media sosialy sy ny fanohanan'ny hafa ny Venezoeliana mba hahazoana fanafody.
Ny kaonty Twitter tahaka ny Servicio Público Vzla (@spvzla), Akistá (@Akiztapp), Ayuda SOS Venezoela (@AyudaSOSVzla), Medicinas Venezuela (@SeBuscaSeDona), DonaMed Venezuela (DonaMed_VE), (@DONANDOTRATAMI) sy ny tenirohy #medicinas (fanafody) #ServicioPublico (sampan-draharaham-panjakana) #SOSsaludVe ary #MedicinasVenezuela (Fanafody Venezoela) no anisan'ireo be mpampiasa indrindra mba hamantarana ny toerana sy ny fanomezana fanafody.
Mila taratasy avy amin'ny dokotera ny sasany amin'ireo kaonty ireo izay fomba tsy hahafahan'ireo tsy mila ny fanafody hahazo izany sy hivarotra izany indray avy eo.
Fanampin'izany, avoaka araka ny anaran'ny tanàna na fanjakana nahitana azy ireo ny anaran'ny fanafody, satria tsy azo atao ny mandefa azy ireo amin'ny alalan'ny tolotra mailaka manokana na amin'ny alalan'ny fomba fanaterana hafa.
Koa satria voaràran'ny governemantam-pirenena ny fandefasana fitsaboana ara-panafody amin'ny alalan'ny mailaka tamin'ny 2014, dia mety ho sakana fanampiny amin'ny fomba fahazoana fanafody ny toerana misy ny marary, raha fanafody no resahina.
Mpanakanto Venezoeliana monina ao an-tanànan'i Valecia, 172 km miala ao andrenivohi-pirenena i Ivonne Capecchi.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Aprily, nanangana tambajotra fanampiana ho an'ireo ankizy ao amin'ny Hopitaliben'i Valencia tao amin'ny Facebook-ny i Capecchi.
Nanomboka nandray anjara niaraka tamin'ireo fianakaviana i Capecchi rehefa avy nitsidika an'i Gerald, ankizy mararin'ny homamiadana, ary nanamafy ny tsy fahampiana goavana ao amin'ny hopitaly.
Ankoatra an'i Gerald, misy ihany koa ireo ankizy hafa miaritra amin'ny famerana goavana ao amin'ny hopitaly.
Noho ny tsy fahampian'ny ho enti-manana, tsy afaka mody ireo ankizy sasany ao amin'ny efitra misy an'i Gerald.
Voan'ny hydrocephalie (fivontosan'ny loha feno rano) ary mila fanafody izay tsy takatry ny fahefa-mividy sy mbola tsy azon’ ny hopitaly ny iray amin'ireo zazakely hafa.
Notantaraina tao amin'ny lahatsoratra tamin'ny Facebook-ny ny ampahany amin'izany zava-nitranga izany:
Miarahaba ry namana… efa maro ireo nosoratako momba an'i Gerald …. Fa ny finday no tena manoratra izany ho ahy ankehitriny.
Nilaza taminao aho omaly fa nankany amin'ny hopitaly mba hahafantatra momba izany. Nandao ny hopitaly tao anatin'ny fahakiviana aho. Misy fidirana ahitana lalantsara lavabe hidirana ao amin'ny iray amin'ireo faritra ao amin'ny hopitaly (tsy misy efitra ho an'ny fianakaviana mba hanaraka anao…). Holazaiko zavatra ianao, mandraisa anjara, fantaro ireo habaka fanaovana fanomezana satria TSY MISY NA INONA NA INONA ao amin'ity firenena fadiranovana ity, mety hanjò anao izany amin'ny fotoana rehetra ary ho fantatrao fa ny tena lozan'ity firenena ity (afa-tsy, mazava ho azy, ireo lehiben'ny governemanta) dia ny OLANA ARA-PAHASALAMANA!!! Baomba vonona hipoaka izany…
Nanomboka teo, nanatevin-daharana azy ny naman'i Capecchi sasany tamin'ny fitsidihana fanaony isan-kerinandro eny amin'ny tobim-pahalasamana.
Noho ireo fanampiana sy fanomezana voarain'izy ireo (avy any ivelan'ny firenena ny sasany) tamin'ny alalan'ny lahatsoratra tao amin'ny media sosialy, marobe ireo ankizy afaka ny hiavotra.
Amin'ny trangan'i Luisito, taorian'ny telo volana niandrasana, afaka natao fandidiana ny ankizy iray noho ny fanomezana fantsona fandevonan-kanina avy any Però […] Tadidio fa simba ny lalankaniny noho ny fitelemana asidra fampiasa amin'ny fanadiovana fitaovana mandefa rivotra (air conditioners). Lazaiko anao izany rehetra izany ry namana [satria] mila lazaina ihany koa ny zavatra tsara. Ankehitriny, nojeren'ny Dr. Jiver Morillo tsy nandoavam-bola izy, ary nojeren'ny Clínica La Viña ao Valencia tsy nandoavam-bola ihany koa, zavatra izay tsy vitan'izy ireo mihitsy taloha noho ny tsy fisian'ny vola …
Amin'izao fotoana izao, mihevitra hanangana orina mpanasoa iray i Ivonne Capecchi sy ny olon-kafa nanatevin-daharana tamin'ny ezaka fanampiana ireo fianakaviana sahirana ara-pivelomana mba handamina asa manoloana ireo fanomezana.
Na izany aza, tara loatra ireo ezaka ireo ho an'ireo ankizy fito namoy ny ainy teo am-piandrasana ny fitsaboana na noho ny fahasarotana mifandray amin'ny faharatsian'ny foto-drafitrasan'ny hopitaly:
Namoy ny ainy tamin'ny tolakandro teo i Moisés raha mbola nitady EPAMIN izahay. Nahavita nahazo ny fanafody izahay, saingy maty izy […] Fantatrareo? Nahatonga ireo ankizy fito namoy ny ainy izany. Tsy zakako intsony ny mahita isa marobe tao anatin'ny telo andro. Nahita fianakaviana roa rava, potika, matin'ny fanaintainana sy ny alahelo aho.
Manoritsoritra ny toe-piainana ao amin'ny hopitaly sy ny famerana fahazoana fanafody ny tatitra avy amin'ny fampitam-baovao nomerika Venezoeliana, El Pitazo.
Manamafy ny famariparitan'i Capecchi ny tatitra (azo jerena ato ny dikandahatsoratra amin'ity lahatsary ity):
Vitsy an'isa Tsy Manan-jo
Amin'ny olana ara-pahasalamana ao Venezoela, ireo tsy afaka mandoa vola any amin'ny toeram-pitsaboana na tsy afaka mividy fanafody any ivelan-tsisintany no tena lasibatra indrindra.
Tsy ireo fianakaviana kely fidiram-bola ihany no hita amin'izany, fa ireo mponina teratany ihany koa
Nitatitra momba izany lohahevitra izany tamin'ny volana Desambra 2015 i Minerva Vitti, mpanao gazety sy mpandray anjara ato amin'ny Global Voices. Mampiseho ny toe-javamisy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Warao [mg] izay tena ratsy dia ratsy tao anatin'ny fotoana elaela ny lahatsoratra nosoratany.
Na tsy afaka miditra amin'ny tambajotra ara-pahasalamana, na tsy mahazo anjara herinaratra mampandeha ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana ny [ao amin'ny] vondrom-piarahamonina;
Tsy nandeha nandritra ny volana maro hatramin'izao ny fitaovana mampandeha ny herinaratra ao amin'ny hopitaly, ary tsy afaka mahazo ireo fitaovana fanamboarana azy ireo ao Venezoela noho ny olana amin'ny fanafarana fitaovana herinaratra samihafa. Midika izany fa miankina amin'ny orinasan'ny herinaratra ao an-tanàna, izay manome tolotra tsy sahaza mihitsy izy ireo.
Andro maromaro lasa izay, nitatitra ny iray tamin'ireo mponina ao amin'ny faritra fa tsy nisy herinaratra izy ireo nandritra ny 20 andro. Tsy maintsy miatrika ireo vonjy taitra marobe amin'ny labozia ireo dokotera ary zaza mihoatra ny iray no namoy ny ainy, indrindra noho ny Aretina Meconium, izay maty noho ny fihinanana ny maloton'izy ireo mandritra ny fahaterahana ny zaza. Maty imbetsaka ny herinaratra tao amin'ny toeram-pitsaboana nandritra ny fotoanan'ny fahaterahana.
Simba ihany koa ny mpamonjy voina an-drenirano. Indray mandeha, tokony nitondra zazakely 6 volana ahitana soritr'aretina fivalanana goavana any amin'ny hopitaly ao Tucupita ny sambo, dia an-tsambo maharitra ora 5 arakaraka ny herin'ny maotera sy ny onjan-drano. Tsy tontosa ny dia. Voatery niala maina ny dokotera sy ny fianakaviana.
Mandritra izany fotoana izany, ireo mitondra ny VIH / SIDA monina ao amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany no tena sahirana kokoa noho ireo mponina andrenivohitra izay efa niharan'ny olana ara-panafody mafy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany.
Nitatitra ny tahan'ny aretina mampivarahotsana i Vitti tamin'ny herintaona ary toa hita fa mbola mitohy mandravarava ao amin'ny faritra sasany ao amin'ny firenena izay efa tsy takatra intsony izany fahasalam-bahoaka izany :
Tamin'ny 2007, nahita tranga VIH 15 tao anatin'ny fiarahamonina ny Vokovoko Mena Venezoeliana […]. Ankehitriny, misy ny VIH ao amin'ny vondrom-piarahamonina Warao miisa 26. Nanjavona roa taona lasa izany ny vondrom-piarahamonina loha-larahana, Jeukubaca.